Difaaca Tottenham ee Kieran Trippier oo u duulaya dalka Spain si uu ugu biiro koox ka dhisan Magaalada Madrid – Gool FM
Difaaca Tottenham ee Kieran Trippier oo u duulaya dalka Spain si uu ugu biiro koox ka dhisan Magaalada Madrid
Haaruun July 16, 2019
(London) 16 Luulyo 2019. Kieran Trippier ayaa la soo warinayaa inuu u duulayo dalka Spain si uu ugu biiro koox ka dhisan caasimadda Waddankaasi ee Madrid.
Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa qarka u saaran inay la saxiixato difaaca naadiga Tottenham Hotspur ee Kieran Trippier, waxaana sida wararku ay sheegayaan kula wareegeysaa adduun dhan 25 milyan oo gini.
28-sano jirkaan ayaa 38 kulan u ciyaaray kooxda Tottenham xilli ciyaareedkii dhammaaday ee 2018/19, laakiin waxa uu lumiyey booskiisa xulka qaranka England, isagoo ku waayey gacmaha da’yarka kooxda Liverpool ee Trent Alexander-Arnold.
Sida ay warinayso Jariiradda The Mirror, kooxda Atletico Madrid ayaa doonaysa inay la saxiixato Trippier oo weliba qarka u saaran kaddib markii uu beeca xorta ah kaga tagay Juanfran.
Trippier ayaa u duuli doona saacadaha soo aaddan si uu u dhammaystiro kooxda Atletico Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain, sida warbixinta lagu sheegay.
Waxaa la rumeysan yahay in macallinka kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino uu diyaar u yahay inuu 28-sano jirkaan dhaafsado lacag kaash ah, Spurs ayaana horay u haystay labo daafac oo kale oo garabka midig ah, kuwaasoo kala ah Serge Aurier iyo Kyle Walker-Peters.
Trippier ayaa horay loola xiriirinayey kooxda Manchester United, laakiin xiisahooda ayaa qaboobay kaddib markii ay 50 milyan oo gini ku dhammaystireen saxiixa Aaron Wan-Bissaka.
Atletico ayaa haatan safka hore kaga jirta suuqa kala iibsiga kaddib markii ay 107 milyan oo gini ka heleen iibka Antoine Griezmann oo ku biiray kooxda Barcelona.
Christian Pulisic oo tababarkiisii ugu horreeyey la qaatay asaxaabtiisa cusub ee Chelsea… + SAWIRRO
Manchester United oo mushaar sare ku soo jiidanaysa Bruno Fernandes & Inta ay todobaadkii siin doonto oo daaha laga rogay